I-Luxury Suite Eduze kwe-Johnnie Fox's Pub (Igumbi 2)
County Dublin, i-Ireland
I-Beechwood House iyikhaya lomndeni elikhulu elisendaweni engama-200m ukusuka endaweni edumile emhlabeni kaJohnnie Fox's Pub and Restaurant. Kunamasango okuvikela anekhodi anendawo yokupaka eyanele. Igumbi linokufinyelela okuzimele ngokufaka okunekhodi. Ikamelo ngalinye lineshawa enkulu enamandla kanye nokushisisa kwangaphansi. I-Glencullen iyidolobhana elinokuthula elihlala liphila njalo ebusuku ngomculo wesintu obukhoma e-Johnnie Fox's Pub. Sicela uhlole ezinye izinhlu zethu ezi-3 uma izinsuku ozikhethile zingatholakali kulolu hlu.
Ikamelo linendlu yokugezela yesimanje enkulu enekhishi elivulekile elinefriji, i-microwave, i-toaster neketela elinetiye nekhofi. Futhi i-smart screen enkulu ye-smart TV ene-Netflix ne-YouTube. Izivakashi zizophinde zibe nokusebenziseka kalula kwe-BBQ enkulu enezihlalo zangaphandle.
4.95(246 okushiwo abanye)
4.95 · 246 okushiwo abanye
Abathandi bangaphandle balindele ubumnandi, njengoba indlu itholakala kwesokudla sendlela ye-Wicklow Way. Le ndawo idume kakhulu ngabahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisikili. Umzila ongemuva kwendlu uholela endaweni yokubuka phezulu kwe-Ticknock Hill, lapho kungajatshulelwa khona ukubukwa okumangalisayo kwe-panoramic yayo yonke iDublin. Indawo iyamangaza, futhi isesangweni lakho. Uma usesimweni sokuphuza isiphuzo kanye nokujabula kwendabuko kwe-Irish, indawo yokudlela edume umhlaba wonke i-Johnnie Fox's Pub and Restaurant iyimizuzu emibili nje yokuhamba ngomgwaqo, ngomculo obukhoma ubusuku obuyisikhombisa ngeviki. Yindawo edume kakhulu unyaka wonke ezivakashini nakubantu bendawo ngokufanayo. Abashisekeli bomjaho bahamba imizuzu eyi-15 kuphela ukusuka eLeopardstown Racecourse.
Mina nomyeni wami uSean sizotholakala ngaso sonke isikhathi ukuze sibhekane nanoma yiziphi izimfuneko ezingase ziphakame.